Ihe ngosi nke ihe ngosi nke oge a na-agba chaa chaa China Manufacturer
Nkọwa:Ebube Egwu Gosiri Ezi,Ound oghere ịgba àmà nke Ound,Okwute Uche nke Oge A
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka > Ọnụ Ụzọ Nkedo Glass > Ihe ngosi nke ihe ngosi nke oge a na-agba chaa chaa
Ihe ngosi nke ihe ngosi nke oge a na-agba chaa chaa
Ihe Nlereanya.: GS-02
Ndị na-arụ ọrụ na-emeghe ọnụ ụzọ maka iko abụọ maka ọnụ ụzọ ụzọ na-emepụta ọnụ ụzọ iko na-egbuke egbuke
Mkpụrụ ahụ bụ DC 24 volt na-enweghị ihe ọkpụkpọ anya na-arụ ọrụ maka arụmọrụ kpọmkwem, arụ ọrụ na-agbachi nkịtị ma na-arụ ọrụ n'enweghị ihe ọ bụla, na-enye nnukwu nsogbu na nnukwu ọsọ ọsọ.
Enwere ike ịhazi onye nwere ọgụgụ isi maka njikọ ọ bụla nche / mkpu usoro, bụ nlekota onwe onye na nhazi, nwere ebe nchekwa maka data niile dị na stoke ụzọ na ọnọdụ nkwụsị.
Onye ọrụ ahụ arụnyewo ike ọkpọsịrị ike (ịrụ ọrụ batrị) na nchebe n'oge okpu ike.
Mpịakọta bụ site na eriri eriri, nke a na-eme ka ndị na-arụ ọrụ na fiberglass na-eme ka ọ dịkwuo ike, ha nwere ihu ihu nịịlọn maka nchebe ezé n'elu ọkụ. Nchikota a na-eme ka ọrụ dị jụụ.
Ndepụta egwu bụ nchịkọta onwe duel linear. A na-eme ka egwu elu ahụ dịkwuo ike 6351T6, a pụkwara dochie ya n'enweghi ike ịgbanwe ya. Ngwongwo ụkwụ a na-eji ụkwụ na-arị elu, na-eme ka ọnụ ụzọ ndị siri ike na-arụ ọrụ n'enweghị ọrụ ọ bụla.
Ibuchi Electromechanical: Nhọrọ mkpọchi eletrik nwere dị iji nye nchebe zuru ezu ma nwee ike ịmegharị ebe enweghị ike ịchọta mkpọchi akwụkwọ, i. E. Ọnụ ụzọ mpempe akwụkwọ a na-agbanye n'ọhịa. Mkpọchi bụ microprocessor na-achịkwa usoro mgbachi eletrik. Onye nyocha microprocessor nyochaa akụkụ niile nke ọrụ mkpọchi. EG Iji hụ na a mechibidoro ụzọ ahụ mgbe mkpọchi ahụ dị 100%. Ntinye ngwụcha dị iji gosi nchebe ma ọ bụ ọnọdụ ọnụ ụzọ na mkpọchi mkpọchi.
Arụ ọrụ na-agbanweghị na nduzi ọhụụ ma ọ bụrụ na a na-egbochi ije, ọnọdụ nhụsiri ike bụ ihe omume.
Ọnụ Ụzọ Igwe Ngwácha Akpaka Na-akpaghị Aka Ụlọ Kpọtụrụ ugbu a
Okpokoro Igwe Akara Akara Ọnụ Ụzọ Mepee Ọnụ Ụzọ Abụọ Kpọtụrụ ugbu a
Ebube Egwu Gosiri Ezi Ound oghere ịgba àmà nke Ound Okwute Uche nke Oge A Ebube Uzo di elu Ebube Nwepu Onwe Onye Ebe nchekwa nri Zipper Ebube PVC ngwa ngwa Ebube ígwè ígwè Flexiile